Fashil Weyn Sunny Leone: “Shumiskii Ugu Horreeyey Ee Aan Sameeyey Aabeheey Ayaa Igu Qabtay, Ka Dibna” – Filimside.net
Fashil Weyn Sunny Leone: “Shumiskii Ugu Horreeyey Ee Aan Sameeyey Aabeheey Ayaa Igu Qabtay, Ka Dibna”
Xiddigtii hore ee aflaata galmada Sunny Leone taasoo haatan iska dhaaftay shaqadaas isla markaana ah atariisho ka xamaalata Bollywood ayaa waxay dib usoo xusuusatay markii ugu horreysay ee ay shumisay wiil uu xiriir jaceyl kala dhexeeyo.
37 sanno jirtaan Sunny Leone oo lagu naanayso Bollywood Baby Doll ayaa daaha ka qaaday in bilowgii nolosheeda ay aheyd gabar aad u jecel inay la baashaasho asxaabteeda. Balse maalin maalmaha ka mid ah ayuu fashil ballaaran ku dhacay markii uu aabeheed ku qabtay iyadoo dhuuqeysa saaxiibkeed.
Waxay aheyd markii ugu horreysay ee ay shumisay saaxiibkeed, wareysi ay siisay kanaalka mareegaha YouTube ee joornaaliiste Hanee Chavan, Sunny Leone ayaa looga soo xigtay: “Wuxuu ahaa wiilkii ugu horreeyey ee aan jaceyl la sameeyey kaasoo aan isla dhiganeynay dugsiga sarre.
“Waxaan xusuustaa inaan daawaneynay filimkii Romeo And Juliet, wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan, lugaha iyo gacmahaba waan isdhaafsanay si dareen leh ayaana isku shummineynay. Halka la joogo waa gurigeenna.
“Balse aabeheey ayaa soo galay guriga inagoo aan ka warheyn, wuxuu arkay wax walba oo ka dhacayey goobta. Kuma uusan faraxsaneyn. Markii aan arkay aabe oo i kortaagan waan naxay. Balse jawaabtii uu i siiyey mid ficil ah ayey aheyd”.
Sababtoo ah qoyska Leone ayaa ka guuray gobolka Michigan waxayna degeen gobolka California ee dalka Mareykanka xiligaas waxaana u sabab ahaa shumiskaas.
Waxaa Aqrisay 1,090